Muqdisho: Xafladdii furitaanka shirkii odayaasha dhaqanka [War-saxaafadeed] • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Muqdisho: Xafladdii furitaanka shirkii odayaasha dhaqanka [War-saxaafadeed]
Muqdisho: Xafladdii furitaanka shirkii odayaasha dhaqanka [War-saxaafadeed]
Posted: Moha Salat - May 6, 2012
Shirkii ergada ansixinta dastuurka ayaa maanta ka furmay Muqdisho, kaas oo isku keenay oday dhaqameedyo gaaraya 135 oo go’aan ka gaari doono soo xulida ergada ka qeyb galeysa baarlamaanka iyo kuwa ansixinta dastuurka cusub.
Munaasabada furitaanka shirka oo aad looga soo qeybgalay ayaa waxaa joogay Madaxweynaha, Ra’isul-Wasaaraha iyo Af-hayeenka Baarlamaanka, kuwaas oo so farxad ku jirto usoo dhaweeyay oday-dhaqameedyada kuna amaanay hogaanka ay shacabka u hayaan. Shirka ayaa wuxuu soo bandhigay go’aanka ay dowladu ay ka taagan tahay dhameystirka heshiiska Roadmap-ka, gaar ahaan, dhameystirka mudada kumeel-gaarka ah.
“Waxaan soo dhaweyneynaa odayaasha qaranka; kusoo dhawaada Muqdisho” ayuu yiri madaxweyne Sharif Sheikh Axmed, oo sheegay in uu ku kalsoon yahay odayaal-dhaqameedka, asagoo ku cadeeyay hadalkiisa in ay shacabka u horkici doonaan midnimo iyo qarannimo. Madaxweynaha ayaa u mahad celiyay deeq-bixiyeyaasha is garab taagay bulshada Soomaaliyeed mudadii ku-meel-gaarka.
“Shacabka Soomaaliyeed waxay maanta odayaasha uga fadhiyaan keenista guul badan,” ayuu yiri Af-hayeenka baarlamaanka, mudane Shariif Xassan, kaas oo kula dardaarmay odayaasha in ay isku raacaan danta guud ee qarannimo.
Dowladda ayaa sharaxaad ka bixisay guulihii ay gaartay bilooyinkii lasoo dhaafay, oo xaqiijisay dhameystirka howlihii geedi-socodka qorshaha nabadda ee ku aadan bilaha harsan. Ra’isul-Wasaaraha, mudane Cabdiwali Maxamed Cali, ayaa hoosta ka xariiqay in isbadalka ay dowladu ku talaabsatay, gaar ahaan kan amniga, uu yahay mid u sahlay dowladda in ay agaasinto shir noocaan ah oo caalami ah.
Bulshada rayidka ayaa sidoo kale goobjoog ahaa, waxayna cadeeyeen in ay ka go’an tahay in ay taageeraan oday-dhaqameedka kuwaas oo xambaarsan danta guud iyo tan bulshada rayidka.
Dowladdu waxay u aragtaa shirkan mid guul ah, kadib markii la isku keenay oday dhaqameedyo muhiim ah, oo la dhameystiray dastuurka qabya-qoraalka. Arintaas waxay soo koobtay howlihii harsanaa ee geedi socodka Roadmap-ka oo ku eg 20-ka bisha sideedaad ee sanadkan.
Wasiirka Dastuurka, mudane Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil ayaa meesha ka saaray hadalo marin-habaabin ahaa oo ay sameeyeen kooxo gaar ah oo kasoo horjeeda horumarinta dastuurka. “Qabya-qoraalka wuxuu salka ku hayaa diinteena,” ayuu yiri Mudane Xoosh oo hadalkiisa ku dhiiragaliyay bulshada si oday-dhaqameedka ay ugu taageeraan gudashada waajibkooda.
Tagged With: Shirka odayaasha dhaqanka